Bibikely ao anaty akoho: mampidi-doza ve ny parasy sy ny fomba hanafoanana azy ireo? - Poultry farming - 2019
Inona no mampidi-doza amin'ny bibikely sy ny piozila ao anaty akoho ary ahoana no ahafahana miala amin'ny ra?
Raha nitranga ny fahagagana iray ary niteny tamin'ny feon'olombelona ilay volombava, dia ny fangatahana fanafahana avy amin'ny parasites no sazy voalohany amin'ny ankamaroan'ny akoho, kansera ary gisadia. Tena manelingelina ny vorona sy ny kongona, mahatonga azy ireo hatory, ary sarotra ny miaina amin'ny ankapobeny.
Ary ny vorona krovushki firy no misotro - tsy iray litatra ny habetsahan'ny vola.
Raha fehezina dia misy sakana goavana hamonoana ny akoho sy ny hafaliana goose - parasites ivelany.
Ankoatr'izay, na dia kely aza izy ireo, dia mbola mitondra ny aretina amin'ny aretina rehetra izy ireo. Amin'ny ankapobeny, ny tompony, mila mamaha zavatra miaraka amin'izy ireo ianao.
Ny zavatra toy izany dia mety hitovitovy amin'ny poti-paty iray amin'ny akoho izay nipoiran'ny parasita.
Ary satria ny akoho dia afaka mangataka ny fanampiana fotsiny ho an'ny olona amin'ny fanampiana, amin'ny tranga faratampony, miaraka amin'ny vazivazy mahatsiravina, ny mpihinam-bitsika dia tsy maintsy mamolavola ny biby fiompy araka izay tratra ary manao ny fehin-kevitra mety: misy trano "trano fonenana" mipetraka ao an-trano.
Ary, raha voamarina ny ahiahy, dia maika maika handray fepetra mba hamonjena ireo vorona.
Biby ao anaty akoho: mampidi-doza sa tsia?
Ny flea sy ny bibikely, toy izany, dia tsy afaka mampianjera fatiantoka goavana amin'ny andian'omby.
Mazava ho azy fa lasa adin-dry zareo ny tsy fahamendrehana ho an'ny sakamalao, mazava ho azy, manimba ny endriky ny vorona izy ireo, mazava ho azy, tsy avelany ny vorona irery, tsy mitsahatra miondrika amin'ny hodiny ary mihodina amin'ny rany.
Fa na dia mandritra ny fanafihana amin'ny tifitra aza dia tsy mitsahatra mihintsy ny akoho, mihinana amin'ny ankapobeny ary mampitombo ny lanjan'ny vatana.
Na izany aza, dia misy foana ny fihenan'ny famokarana amin'ny fiompiana biby miaraka amin'ny fisian'ny pila sy kongona. Ny loza mety hitranga dia ny hoe ho lasa be loatra ny parasita ao amin'ny vatan'ny vorona ary ho afaka handresy ny akoho izy ireo, ka hanafika azy amin'ny areti-mifindra.
Saingy ny tranga toy izany dia tsy fahita firy, satria ny tantsaha mpamboly dia manara-maso tsara ny endriky ny parasita ao an-trano ary mandray fepetra maika mba hamotehana azy ireo.
Ny trobana, manenjika ny volon'ireo vorona ao an-trano, dia mitoetra ho "trano fonenana maharitra" (mandra-pahatongan'ny fotoana tsy misy azy ireo).
Mifanohitra toy izao ny kongona: Nanafika ny fiompy izy ireo tamin'ny alina, mandritra ny torimasony ary, rahefa feno ra, feno sakafo sy afa-po, dia mamela ny vorona hafenina ao amin'ny toerany izy ireo mandra-pahatongan'ny fitsidihany mahery vaika.
Samy hafa ny bibikely, samy misotro ny rany amin'ny endriny samihafa izy ireo, saingy ny famantarana ny fisian'izy ireo any anaty fiompiana dia tena mitovy. Miaraka amin'ny endrik'ireo sy ireo olon-kafa, dia mikaroka sy manadio ny volony foana ny akoho.
Ny kintana manana tongony fohy loatra mba hahatongavana any amin'ny toerana rehetra nalain'ny parasita, dia nahavita nanesoeso ny vavony, toy ny gisa.
Ankoatry ny fanenjehana, ny famantarana ny fisehoan'ny parasita dia mety ho fahasimbana amin'ny karazana volom-borona: ny volom-borona ao anaty fiompiana dia mamoy ny felany, manjary matanjaka sy misavorovoro.
Ny fisian'ny parasy dia azo aseho amin'ny fihenan'ny vokatra avy amin'ny vorona miaraka amin'ny fialan-tsasatra tsara (na dia mihalefy aza). Ny fampihenana ny fanoherana ny aretina dia mihatra koa amin'ny soritr'aretina izay manondro ny fisian'ny pila na kongona amin'ny biby fiompy.
Ny mofomamy Bress Gali dia manana loko fotsy madio, mitovy amin'ny vehivavy. Saingy ny fako mena sy ny haben'ny habeny dia tsy hamela anao hampifangaro azy ireo.
Raha mahita syringophilose amin'ny vorona ianao dia vakio avy hatrany: //selo.guru/ptitsa/bolezni-ptitsa/nasekomye/siringofilez.html.
To diagnose vorona, tanana mahery sy fahitana tsara. Ny fahazavana tsara kalitao dia ho fitaovana iray fanampiny amin'ny fitsaboana.
Afaka mahita marika ianao amin'ny fanaraha-maso ny volon'ireo vorona sy hoditra. Ny fisafidianana iray amin'ireo olona tsirairay, dia mila mandinika amim-pitandremana ny lohany, ny tongony ary ny faritra eo ambanin'ny rambony, izay misy ny felam-bintana no tena mampiroborobo indrindra.
Raha misy parasita, dia azo antoka fa hialokaloka izy ireo: paompy ao anaty akoho dia tsy mipetraka intsony, indrindra amin'izao fotoana izao rehefa mahatsapa ny loza ateraky ny fanenjehana sy ny fandringanana.
Raha hitanao eo amin'ny vatan'ny akoho ireo parasita, ary tsy azo atao ny manangana ny bika aman'endriny dia ilaina ny mitodika any amin'ny mpitsabo saina.
Ny parasy izay manafika vorona fotsiny ho an'ny fikarakarana (kongona) dia sarotra hita. Mba hanaovana izany dia mila manamboatra karazana vorona ianao amin'ny alina.
Ao an-trano, ny zana-vorona dia raisina amin'ny fomba efa tranainy: raha misy olona manana tahirim-bola taloha, dia afafazo amin'ny vorona io vovoka io. Izany, raha ny marina, dia tapitra ny fepetra.
Na izany aza, ny minisitry ny fahasalamana taona vitsy lasa izay dia nanao fanatsoahana momba ny voka-dratsin'ny vovoka ary nesorina tamin'ny famokarana.
Inona àry ny fitsaboana ny akoho amin'ny fleas sy kongona amin'ny dingana maoderina, postdustovogo? Zava-mahadomelina mahomby: organophosphorus compounds, pyretroids synthétiques, carbamate et pyrethroid inscéticides.
Ireo solontena avy amin'ny parasites dia efa vidy amin'ny vaksiny vététique efa efa vita ary vita amin'ny fambolena rano, vovobony, mifantoka amin'ny siramamy.
Amin'ny fampiasana ireo zava-mahadomelina rehetra ireo dia tsotra. Ny zavatra tokana izay fampitandreman'ny veterinariana mialohan'ny hanombohana fitsaboana dia ny tsy tokony hampifangaroany amin'ny fomba rehetra.
Ny sasany amin'ireo mpihinam-bitsika efa ela izay efa zatra amin'ny zava-mahadomelina momba ny fitsaboana vétérina miaraka amin'ny doka maneso, dia mino fa ny havokavoka tsotra dia manana fiantraikany tsara amin'ny fitsaboana, izay mihoatra noho ny ampy ho an'ny tokotanin'ny henam-baravarana.
Ny hafa indray mihevitra azy io ho fanasitranana parasy. Persian daisy (tsy tokony ho menatra amin'ny pharmacy). Ity zavamaniry ity dia misy tsiranoka izay mampidi-doza amin'ny fleas sy kongona - pyrethrin, izay, raha mahita izany, dia handositra ny trano, na ho faty.
Ny hetsika rehetra amin'ny fisorohana ny fleas sy kongona dia tokony hikendry ny hamolavola ny fepetra mifanentana amin'ny fikojakojana ny vorona: trano madio, fahadiovana matevina, fanindronana.
Ao amin'ny fisorohana ny parasites, fiovàna fihenam-bidy tsotra dia mahomby.izay ahitan'ny parasites sy ny lavany.
Fomba hafa ilaina amin'ny fisorohana - ny fandringanana ireo mpihantona mandondona ao anaty vala. Ny rat sy ny totozy dia tsy mampidi-doza ho an'ny zazalahy, ny atody, fa ho an'ireo olon-dehibe ihany koa, izy ireo, ankoatra ny zavatra hafa, dia mijaly amin'ny parasy ary afaka mampiditra biby fiompy manontolo amin'ny elany.
Ny fanontaniana mikasika ny famongorana ireo mpihatsaravelatsihy dia tena manan-danja amin'ny fahalavoana, rehefa miandrandra ny fitsangatsanganana, ny totozy sy ny ratiny dia miezaka ny hiongana amin'ny fieken-keloka.
Ny pelaka sy ny kongona dia manome voka-dratsy be dia be amin'ny vorona.
Noho ireo parasy kely ireo, ny sakafon'ny vorona dia tsy afaka miala sasatra ary miaina tsy tapaka amin'ny faniriana hikorontana, ka manala ny fahatsapana hafanana amin'ny hoditra.
Saingy raha maniratsira ny vorona ny buggy sy ny fleas! Saingy afaka manaparitaka aretina goavana marobe izy ireo: Hepatita B sy C, salmonellose, typhus ary aretina hoditra.
Ary ny loza toy izany dia lasa fototry ny antony hanesorana ireo parasy, raha toa izy ireo dia voatsodrano ao an-trano ary manakana ny fisehoana raha mbola tsy eo izy ireo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Inona no mampidi-doza amin'ny bibikely sy ny piozila ao anaty akoho ary ahoana no ahafahana miala amin'ny ra?